नेपालीलाई सुहाउँदा आकर्षक स्मार्टफोन सामसुङले ल्याएको छ : स्थापित - Living with ICT
Home / Featured / नेपालीलाई सुहाउँदा आकर्षक स्मार्टफोन सामसुङले ल्याएको छ : स्थापित
Shiva Basnet Jan 26, 2017	Leaveacomment
डेपुटी जनरल म्यानेजर (आइएम बिज) सामसुङ इलेक्ट्रिोनिक्स नेपाल
सामसुङ इलेक्ट्रिोनिक्स नेपाल कुन अपेक्षाका साथ क्यान इन्फोटेकमा उपस्थित भएको छ ?
क्यान इन्फोटेक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि मेला हो । सामसुङ स्मार्टफोनमा रहेका फिचर तथा नयाँ प्रविधिहरुबारे अवलोकनकर्ताहरुलाई बुझाउन तथा अवगत गराउने मूल्य उद्देश्यका साथ सामसुङ उपस्थित भएको छ । सामसुङका नयाँ प्रडक्टको अनुभव गराउने कुरा पनि छँदै छ ।
इन्फोटेकमा नयाँ प्रडक्टका रूपमा केके ल्याउनुभएको छ ?
नयाँ स्मार्टफोनका रुपमा ग्यालेक्सी सी ९ प्रो, ग्यालेक्सी ए सिरिज र ग्यालेक्सी अन ७ प्रोलाई प्रदर्शनीमा राखेका छौं । सी ९ प्रो ६ जिबी ¥याम भएको सामसुङको पहिलो स्मार्टफोन हो भने अग्मन्टेड रियालिटी (एआर), भर्चुअल रियालिटी (भिआर) तथा गेमिङका लागि उपयुक्त छ । ए सिरिज (२०१७) मा हाई एन्ड एस सिरिजमा भएका लेटेस्ट फिचरहरु अटाइएका छन् भने अन ७ प्रो चाहिँ फोरजी सपोर्ट गर्ने बीस हजार मूल्यभन्दा तलको एन्ट्री लेभल स्मार्टफोन हो । इन्फोटेकमा केही सीमित रकममा यी स्मार्टफोनहरुको अग्रिम बुकिङ गर्न सकिनेछ । यहाँ गिअर भिआरको पनि आनन्द
लिन सकिने छ ।
नेपाली स्मार्टफोन बजारमा सामसुङको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाली स्मार्टफोन बजारमा सामसुङको दुईतिहाइ बजार हिस्सा रहेको छ । सामसुङले हरेक वर्गका प्रयोगकर्तालाई लक्षित विभिन्न मूल्यसूचीमा रहेर लेटेस्ट फिचर समावेश भएका स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । त्यसमा पनि सामसुङले दक्षिण एसियाका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरेर लोकल र कस्टमाइज फिचरहरु समावेश गरेको छ । नेपाली प्रयोगकर्ताको अवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर एस बाइक मोड, अल्ट्रा डाटा सेभिङ मोड, टर्बो स्पिड प्रविधिलगायत फिचरहरु ल्याएको छ, जसले गर्दा ब्रान्ड र प्रयोगकर्ताबीचको आत्मीयता तथा विश्वास बढेको छ ।
धेरै स्मार्टफोन ब्रान्ड आएका छन्, यसले सामसुङलाई कत्तिको चुनौती दिएको छ ?
बजारमा नयाँ ब्रान्ड र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नुलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छौँ । यो उद्योगको विकासका लागि आवश्यक पनि छ । तर यसबाट सामसुङलाई अझ दरिलो गरी उपस्थित हुन थप हौसला र प्रेरणा मिलेको छ ।
Previous प्रविधिको कुम्भ मेला सुरु, उद्घाटनमा उपप्रम महराले भने, ‘१० वर्षमा ई–नेपाल बनाउँछौं’
Next इन्फोटेकमा इन्टरनेट र क्लियर टिभीको कम्बो अफर ल्याएका छौं : पराजुली